အက်မင်လက်ထောက် / လူမှုမီဒီယာ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » အဒ်မင်လက်ထောက် / လူမှုမီဒီယာ
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: အဒ်မင်လက်ထောက် / လူမှုမီဒီယာ
ရာထူး: အဒ်မင်လက်ထောက် / လူမှုမီဒီယာ
ကုမ္ပဏီ: အမြဲတမ်းတိုက်ဖျက်မည်ပေ Resort ကို
တစ်ဦးချွန်ထက်မြန်ဆန်စဉ်းစားတွေးခေါ်, ငါ့ကိုချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရကူညီပေးဖို့ဖန်တီးမှုအကူအညီများလိုအပ်ပါတယ်! အားလုံးသို့မဟုတ်ဤစာရင်းအချို့ကိုသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် မူတည်. အတူ။
ပန်းသီးအတွက်တတ်ကျွမ်းသူတစ်ဦးဦး; အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာပန်းသီးအစီအစဉ်များနှင့်အတူဖန်တီးလိုက်ပါပြီကတည်းကအဓိက, စာမျက်နှာနှင့်နံပါတ်များနှင့်ရုပ်ရှင်လိုအပ်ပါသည်။
photoshop အသိပညာလိုအပ်လျက်ရှိ၏ ကျွန်တော်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ, Flyer နှင့်ဓာတ်ပုံများကို clean up ဖန်တီး facebook ကိုကြော်ငြာဘို့ငါတို့လိုဂိုပူးတွဲအဖြစ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက်အသိပညာလိုအပ်ပါသည်။ wordpress ကိုသို့မဟုတ်အလားတူ application ကိုတစ် facebook ကိုဆင်းသက်စာမျက်နှာကိုဖန်တီးကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်; တိုးမြှင်သို့မဟုတ်ဖန်တီးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့် facebook ကိုပေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ခြင်းဖြင့်ပိုပြီးအကျိုးရှိဖြစ်သော သိ. မှတဆင့်ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုမြှင့်တင်ရန်။
တစ်ကိုင်အပေါ်ခလုတ်ကို script ကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအကောင့်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပစ္စည်းရှာဖွေပုံနှိပ်ပေးပို့နိုင်စွမ်း; အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းထွက်ပြေး။ ဆိုလိုသည်မှာ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များ Flyer, နာမည် tags များ, လက်ကမ်းစာစောင်, နို့တိုက်ကျွေးရေးစာရွက်များ, etc
လက်ရှိတွင်ငါတစ်ခုချင်းစီကိုလူတစ်ဦးချင်းစီပြောင်းကုန်ပြီပြီးစီးရန်လိုအပ်ပါသည်တာဝန်များကိုများစာရင်းကိုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ သေချာမဒီတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်လက်ကမ်းစာစောင် "စာရင်း app ကိုပြုပါရန်" မှတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုပါက? ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တစ်တွေအလုပ်တခုကိုဒါပေမယ့်န်ထမ်း alwasy ဘုတ်အဖွဲ့ပြီးစီးရတဲ့မဟုတ်ပါယှဉ်ပြိုင်လာသောအခါအားလုံးအမှုကိုပြုရရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်နေ့ရက်တိုင်းနှင့်ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ရုံရှိ initials ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးချင်းစီတာဝန်ခံ-လက်ရှိကျင်းပရန်ပိုကောင်းတဲ့လမ်းလိုအပ်သိလား နှင့်အကြီးအကျယ်ကြောင့်တာဝန်များကိုဦးချင်းလူများတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းသူတို့၏တစ်ဦးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်အသီးအသီးပြောင်းကုန်ပြီစီမံနိုင်သည်ဘယ်မှာစနစ်များကိုလိုအပ်ပါတယ်။
ပိုပြီးဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာ (ဗီဒီယို၏ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်) နဲ့လေ့ကျင့်ရေးလက်စွဲရနျလိုအပျ; လက်ရှိပြောရမှာတင်ပြချက်များသို့ဗီဒီယိုကိုထည့်။
ကရင်သင်အရာများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အပန်းဖြေပင်ပိုကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပြီးမြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ခဲ့ကြသည်အတူတန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းနိုင်ခံစားရပုံကိုရှင်းပြသင့်ရဲ့ phone- နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့်ဗွီဒီယိုအတိုပေးပို့ပါ! အဆိုပါဗီဒီယိုအားငါသည်သင်တို့ကို "အသကျရှငျ" နှင့်သင်နှင့်သင့်ဖန်တီးမှုတွေအကြောင်းနည်းနည်းကြည့်ရှုဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်အရေးပေါ် ASAP 480 646-0777 ကရင်
ယောဘသည်အမျိုးအစားများ: အချိန်ပြည့်, ယာယီ
လစာ: $ 15.00 မှ $ 25.00 / နာရီ
admin ရဲ့ assit / လူမှုရေးမီဒီယာ:2နှစ်ပေါင်း (ဖြစ်နိုင်ရင်)
virtual reality 2018-09-28
ယခင်: ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် International
နောက်တစ်ခု: အကြီးတန်းအဆိုတော်များ၏လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်၎င်း၏ပိုက်လိုင်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ VFX Legion Marks 5th နှစ်မြောက်